Gopi Krishna Dhungana (Pathik) : September 2014
गायक दीपलाई बिपनीमै ऐंठन
धोबीखोलाको बाढी बस्तीमा
काठमाडौं : 'हररात सपनीमा ऐंठन हुन्छ, गाउँमा सायद पहिरो गयो कि...।' सहरमा बस्ने गाउँलेलाई हुने बर्खायामको पीडा समेटिएको यो चर्चित गीत गाउने दीप श्रेष्ठले कहिल्यै सोचेका थिएनन्, सहरबासी आफैंले कुनै दिन बाढीको पीडा भोग्नुपर्ला भनेर।
राजधानीको अनामनगरवासी श्रेष्ठको घरमा बिहीबार मध्यरातमा धोबीखोलाको बाढी पस्यो र उनले उहिल्यै आफूले गाएको उक्त बोलको गीत सम्झन पुगे। यो घटनाले उनलाई सपनीमा होइन बिपनीमै ऐंठन बनाएको छ।
श्रेष्ठको बस्तीमा पहिरो त गएन तर मध्यरातमा परेको मुसलधारे पानीका कारण घरको भुइँतला डुबानमा परेपछि उनको मनमा पहिरो गएको छ। अन्नपूर्णकर्मी शुक्रबार मध्याह्न घरमा पुग्दा उनी भिजेको तानपुरा, तबला र सीडी बजाउने स्पीकर आँगनमा सुकाउँदै थिए।
'मेरो सांगीतिक कोठामा भएका दुई हजारभन्दा बढी सीडी, भिसिडी कामै नलाग्ने गरी पानीले डुबायो', उनले भने, 'सहरमा बसेर पनि बाढीपीडित भइयो, सुकुमबासीलाई जस्तो समस्या भयो।' मोटर लगाएर घरभित्र पसेको पानी फालेको बताउँदै उनले होन्डा सिटी गाडी पनि डुबानमा परेकाले सफा गर्न ग्यारेज पठाएको जानकारी दिए।
पत्‍नी सोफियाले भनिन्, 'सरकारले धोबीखोला करिडोर बनाउँदा इन्जिनियरिङ पाटोमा गम्भीर भएन। खोलाको भर हुँदैन भन्‍ने थाहा पाउँदापाउँदै इन्जिनियरहरूले पनि यस्तो हेल्चेक्र्याइँ गर्न हुँदैनथ्यो। करिडोर बनाएपछि दुवैतर्फ कम्तीमा तीन मिटर अग्लो पर्खाल उठाउनुपर्थ्‍यो ।'
धोबीखोला करिडोरनजिकै घर भएका पूर्वसिँचाइमन्त्री उमाकान्त झा पनि शुक्रबार दिउँसो पानीले भिजेको भान्छाकोठाको पार्केटिङ निकाल्दै थिए। आँगनमा रहेको १० हजार लिटरको खानेपानी ट्यांकीमा लेदो भरिएको देखाउँदै पूर्वमन्त्री झाले भने, '४६ सालदेखि यहाँ बस्दै आएको छु तर कुनै दिन यस्तो भएको थिएन।
यहाँका हामी बासिन्दा मिलेर मदन भण्डारी क्याम्पसछेउमा सजिलोका लागि पुल बनाएका थियौं। आज त्यही पुलले यो गति बनायो।' उनका अनुसार बागमती नदीमा जस्तै दायाँबायाँ ठूलाठूला ह्युमपाइप राखेको भए यस्तो अवस्था हुने थिएन।
माथिल्लो तलामा सुत्‍ने झा दम्पतीले मध्यरातमा छिमेकीले टेलिफोन गरेपछिमात्र घरमा बाढी पसेको थाहा पाएका रहेछन्। त्यसपछि उनले विद्युत् प्राधिकरणमा फोन गरेर बिजुली लाइन काट्न लगाएका थिए। उनकी पत्‍नी सभासद् इन्द्रा झाले भनिन्, 'मेरो महिन्द्रा गाडीमा धेरै क्षति भयो।'
बाढीको पानी पसेर मदन भण्डारी क्याम्पस र आसपासका करिब एक हजार घरपरिवार प्रभावित भएका छन्। क्याम्पसको उत्तरतर्फको सानो पुलको रेलिङ र सडकतर्फको भाग बाढीले बगाउँदा सवारीसाधन चल्न सकेका छैनन्।
क्याम्पसको दक्षिणतर्फ बनाएको नयाँ पुलमा रेलिङ अड्किँदा पानी बस्तीमा पसेको थियो। पुलछेउको बनारसी बुक्स एन्ड स्टेसनरीकी प्रमिला आचार्यले भनिन्, 'बनेपाबाट बिहान ६ बजे पसल खोल्न आउँदा पो बाढी पसेको थाहा पाएँ।
सटर खोल्दा त धेरै क्षति भइसकेको रहेछ।' पसलछेवैमा रहेको चलचित्रकर्मी शम्भु प्रधानको नूतन स्टुडियो रहेको घरको भुइँतला पनि लेदोले भरिएको थियो। खोलाको दायाँबायाँ हिला ये थियो।
पीडित धनेश झाले एक लाख १० हजारको एउटा र केही कम मूल्यका दुईवटा सोफा, महँगा कार्पेट, दस बोरा चामललगायत खाद्यसामग्री नष्ट भएको जानकारी दिए। उनले भने, 'बाढीले रातभर टोलवासीलाई तनाव दियो।
कोठा, कपडा र सामान सफा गर्दा दिनभर सास्ती भयो।' क्याम्पस उत्तरतर्फका टेकनाथ काफ्लेले पनि घरमा बाढी धेरै सामान क्षति भएको बताए। शिवालयको पर्खाल भत्काएर बाढी बस्तीमा पसेको थियो। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त भाइकाजी तिवारीले क्याम्पसछेउमा बनाएको पुलका कारण बाढी बस्तीमा पसेको बताए।
मिति : २०७१ असोज, ४ शनिबार
- See more at: http://annapurnapost.com/en/news/entertainment/13917
Labels: अनामनगर, गोपीकृष्ण ढुंगाना, दीप श्रेष्ठ, धोबीखोला, माकान्त झा
दसैं संघारमा छ। शुभकामना आदानप्रदान हुन थालेको छ। कस्तो हुन्छ जब यो बेला साहित्यले पनि दसैंलाई स्वागत गर्छ ? राजधानीमा शुक्रबारदेखि भइरहेको एनसेल नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलले यसै गरिरहेझैं भान भइरहेको छ।
त्यसो त साहित्यको कुनै निश्चित धर्म हुँदैन। सम्प्रदाय हुँदैन। त्यसैले दसैंलाई साहित्यसँग जोडनु प्रकारान्तरले सही पनि हुँदैन। तर, यहाँ पर्वमा मानव मनमा हुने उल्लासलाई यहाँ जोड्न खोजिएको हो।
बुकवर्म फाउन्डेसनको आयोजनामा हुने चारदिने फेस्टिभलमा भने इटाली, अफगानिस्तान, बेलायत, बंगलादेश र भारत गरी पाँच देशका ६ जना साहित्यकार सहभागी हुनेछन्। वरिष्ठ साहित्यकार डा. बानिरा गिरीले उद्‌घाटन गर्ने महोत्सवमा समाजशास्त्री डा. चैतन्य मिश्रले मुख्य मन्तव्य दिनेछन्।
'जातको कथा' माथि उनी बोल्नेछन्। भारतका पूर्वराज्यमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ साहित्यकार शशि थरुरले समापन मन्तव्य दिनेछन्, जर्ज अरवेलबारे। फेस्टिभलले गैरसाहित्यिक सन्दर्भहरूलाई पनि मजैले समेटेको छ।
फेस्टिभल निर्देशक अजित बराल साहित्यिक पाठक सीमित भएकाले गैरसाहित्यिक विषयलाई पनि समेटिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, 'गैरसाहित्यिक मानिसलाई ल्याएर साहित्यमा रुचि जगाउने एउटा उद्देश्य र साहित्यकारहरूलाई पनि गैरसाहित्यिक विषयमा रुचि बढाएर नयाँ विषयवस्तुमा रुचि जगाउने अर्को उद्देश्यका साथ महोत्सव गर्दैछौं।' महात्सवलाई एनसेलले प्रायोजन गर्न थालेको यो चौथौं वर्ष हो।
त्यसो त राजधानी अहिले अर्को कारणले पनि साहित्यमय भइरहेको छ। याम्बुरी बुक प्वाइन्ट र घोस्ट राइटिङ नेपालले भदौ २७ गतेदेखि सुरु भएको 'बृहत् राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी तथा साहित्यिक यात्रा महोत्सव २०७१' असोज ५ गतेसम्म चल्दैछ।
याम्बुरीका प्रबन्धनिर्देशक कुयाङ लामा भन्छन्, 'यो महोत्सवले साहित्यिक सिन्डिकेटलाई चिरेको छ। एकआपसमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका हामी प्रकाशकबीचको कालो बादल केही हदसम्म महोत्सवले हटाउनेछ।'
डेनमार्कमा हुने साहित्यिक महोत्सवका लागि नेपालबाट एक साहित्यकार पुगे। उनी अचम्म परे, अचम्म पर्नुको कारण अरू केही थिएन। आयोजकले नै अचम्म तुल्याएको थियो उनलाई। अचम्म पार्ने आयोजक थियो टुबोर्ग बियर अनि अचम्मित हुने साहित्यकार प्राडा अभि सुवेदी।
साहित्य अनुत्पादक क्षेत्र हो भन्नेहरूलाई चुनौती थियो त्यो। र अरू थुप्रै संघसंस्था जसले साहित्यमा लगानी गर्न चाहँदैनन्, तिनलाई पनि एउटा उदाहरण हो त्यो। नेपालमा पनि केही वर्षदेखि मोबाइल 'सिम' बेच्ने कम्पनी एनसेलले 'साहित्य' प्रवर्द्धनमा लगानी गरिरहेको छ।
सुवेदी भन्छन्, 'मुख्य कुरा हामी लेखक साहित्यकारहरूले चरित्र गुमाउनु हुँदैन, साहित्यलाई प्रवद्र्धन गर्छन् भने जसले लगानी गरे पनि भयो।'
केही वर्षयता नेपालमा बर्सेनि साहित्यिक महोत्सवहरू आयोजना भइरहेका छन्। त्यो कहिले राजधानी काठमाडौं हुन्छ त कहिले नेपालको पूर्वी मेची अनि कहिले सुदूरपश्चिम महाकालीमा। महोत्सवले माहोल तताइरहेको छ।महोत्सवहरूमा मोफसल समेटिन थालेका छन्।
अनि समेटिन थालेका छन् विदेशी लेखक र विदेशी लेखन पनि। एकदिने, चारदिने हुँदै दस दिनेसम्म साहित्यिक महोत्सव हुनुले साहित्यिक संकेत 'शुभ' भइरहेको प्रस्ट छ। तिनमा हुने दैनिक चारपाँच विषयका छलफलले नयाँ कुरो जन्माइरहेछ। त्यसले शक्ति दिएको छ साहित्यकारलाई।
कवि तुलसी दिवस विदेशी लेखकहरूबाट महोत्सवमार्फत अनुभव, अनुभूति र अक्षरहरूमा खेल्ने अभ्यासबारे प्रशस्त ज्ञान लिन सके नेपाली साहित्यकारले आफूलाई पनि गुणस्तरीय बनाउन सक्ने बताउँछन्। भन्छन्, 'लेखकको प्रभाव लिने होइन, उसले कसरी, के लेखिरहेछ, त्यो जान्नु र बुझ्नु नै अर्को लेखकका लागि गतिलो खुराक हो।'
महोत्सवले मोफसललाई जोड्न बर्सेनि थुप्रै पुल बनाइरहेका छन्। कुनै समय थियो, साहित्य राजधानीमा मात्र फुल्थ्यो। र फैलिएर साम्राज्य जमाएको थियो। प्रविधिको बढ्दो आधुनिकीकरण एकमात्र प्रमुख कारण बन्दै गइरहेको छ एउटा प्रश्नको उत्तरका लागि, 'के नेपाली साहित्यमा अझै मोफसल बाँकी छ?'
हुन त यो आजका दिनसम्म बहसकै विषय छ। तर त्यसलाई 'ग्लोबल भिलेज' झैं बनाउँदैछन् राजधानी र राजधानीबाहिर हुने गरेका साहित्यिक महोत्सवले। पोखराकी साहित्यकार सरस्वती प्रतीक्षा भन्छिन्, 'सापेक्षताको तराजुमा तौलेर हेर्दा राजधानीवाद कति कमजोर वा शक्तिशाली हुन्छ भन्‍ने कुरा मोफसल कति सक्रिय वा निष्क्रिय छ, त्यसमा पनि भर पर्दछ। जति जति मोफसल सक्रिय हुँदै जान्छ, त्यति त्यति राजधानीवाद कमजोर हुँदै जान्छ।'
महोत्सवमा विषय, सन्दर्भ र शैली पृथक् हुनुले साहित्य विकासको गुणस्तरमा पार्ने प्रभावमा सायदै कसैको दुई मत रहला। प्राध्यापक दिवस भन्छन्, 'भिन्न उमेर, क्षेत्र, जातजाति र संस्कृतिलाई अगाडि ल्याएर महोत्सवले साहित्यक संगम गराउनुपर्छ।
प्रत्येकलाई आफ्ना कुरा बाहिर जनमानसमा ल्याउने अवसर जुटाउनुपर्छ।' 'प्रकाशकका बजारमा लेखक साहित्यकार छौं, हाम्रो बजारमा उनीहरूलाई ल्याउने वातावरण बन्‍नुजरुरी छ', महोत्सवले भारतीय नेपाली पाठकसम्म लेखकलाई पुर्‍याउन नसकेको गुनासो गर्दै डा. सुवेदी फरक मतमा यसरी उभिन्छन्, 'युवा राजनीतिमा बढी छन्, जसमा निराशा बढिरहेछ। उनीहरूको त्यो ऊर्जालाई साहित्यले चुम्बकझैं तान्न सक्नुपर्छ, जुन संकेत महोत्सव र पुस्तक प्रदर्शनीहरूले दिइरहेका छन्।'
एनसेल नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलमा यसपटक बंगलादेशकी फरह गुज्नामी, बेलायतकी तिस्हानी दोषी, इटालीका कार्लो पिज्जाती, भारतका हर्तोष बाल सिंह र अफगानिस्तानका म्याथ्यु आइकिन्सका साथै लेखक, विद्वान र पत्रकार गरी एक सय ४० जना छलफलमा सहभागी हुनेछन्।
जहाँ पत्रकारिताका सम्पादकीय स्वतन्त्रता, विचार पृष्ठका आधारदेखि फिल्म : पैसा कि कला, कला : अन्तरसम्बन्धको अनुशासन, लोग्ने मान्छे भएर रुनु हुन्न रे :इन्टरोगेटिङ जेन्डर, नारायणगोपालको युग, बालसाहित्य, इकोनोमिक डिप्लोमेसी, मातृभाषा र दलित साहित्यको सौन्दर्य, जलस्रोतहुँदै वरिष्ठ साहित्यकारका कहाँ गए ती दिनसम्मलाई स्थान दिइएको छ।
कवि एवं गीतकार श्रवण मुकारुङ पीडित नेपाली लेखकका दिन महोत्सवले फर्काएको बताउँछन्। भन्छन्, 'महोत्सव र प्रदर्शनीले पुस्तक बिक्री गर्ने र एउटा पुस्तक खोज्न दसतिर भौतारिने पाठकका दु:खका दिन गएको संकेत गरेका छन्।
लेखक दसवटा पुस्तक बिक्री गर्न दिएर पारिश्रमिक उठाउन ५० वटा पुस्तकको मूल्य चुकाउन बाध्य भइरहेको सन्दर्भमा महोत्सवहरू 'सहजताको पुल' बनेका छन्।'
प्रकाशकहरूले पनि अब पारदर्शी भएर लेखकसाहित्यकारलाई 'खुसी' दिन दिनुपर्नेमा उनको जोड छ। थप्छन्, 'साहित्यिक महोत्सवमा निजी क्षेत्रले धेरै गरेको छ, अब सरकार पनि 'साहित्य' मा जोडिनुपर्छ।'
- See more at: http://annapurnapost.com/en/news/specialpage/13943/%E0%A4%85%E0%A4%95%E0%A5%8D%E0%A4%B7%E0%A4%B0%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A1%E0%A5%8C%E0%A4%82.htm#sthash.gIRrS7hz.dpuf
Labels: अक्षरमाडौं, तुलसी दिवस, शशि थरुर, श्रवण मुकारुङ
Jyotis ko Bhagya
600 Ga B Sa Sadak Sanjaal
भाग्य हेर्नेको 'भविष्‍य'
'बुढेसकाल ढुक्कको देखेको छु', भविष्यवक्ता हुन सजिलो नभएको बताउने ज्योतिषी चिन्तामणि पोखरेल आफ्नै भविष्यबारे भन्छन्। 'नाईले आफ्नो कपाल आफैं काट्दैन' भन्‍ने लोकोक्ति भए पनि पोखरेल व्यावसायिक भएयता आफ्नो भविष्य आफैं हेर्छन्। दिल्लीमा बाटोको रूखमुनि बसिरहेका एक ज्योतिषीले भनेका थिए, 'बेटे, नोकरी मत करो, खुदका बिजनेस करो।'
रेल्वे इन्डियनमा कार्यरत उनलाई त्यो कुरो मजैले गढ्यो र उनले समाते ज्योतिष काम। उनी भन्छन्, 'उता विद्यार्थी जीवनमै प्यूठानमा हुँदा महिला ज्योतिषले पनि ३६ वर्षको भएपछिमात्र कमाएर खान्छस् भनेकी थिइन्, त्यस्तै पुग्यो।'
पोखरेल भविष्यबारे कुनै नराम्रो संकेत देखे त्यसमा योगसाधना गर्छन् र सम्भावित खतरा वा दु:ख कम गर्छन्। तर, एउटा कुरो भने ज्योतिषीको कुरो पुगेन। भन्छन्, '२१ वर्षमा राजयोग छ, धनसम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ भनेका थिए एक ज्योतिषीले तर उल्टै त्यो समयमा बसबाट सामान्य दुर्घटना भएर दाहिने कुममा समस्या भयो।' ब्रह्मशक्ति र छैटौं इन्द्रिय (अतिन्द्रेय) विकास नहुनेले भविष्यवाणी गर्न नसक्ने पोखरेलको भनाइ छ।
उनले दिल्लीमै दुईवटी पत्नी हुने सूचना पाइसकेका थिए। नभन्दै भयो पनि त्यस्तै। २०४१ मंसिरमा दोस्रो विवाह हुँदाका समयसम्म उनलाई ज्योतिषमा त्यति विश्वास थिएन। अरूको भाग्य हेरेरै १३ वर्ष बिताएका उनले आफ्नो भाग्य भने सहजभन्दा असहज परिस्थिति आउँदा बढी हेरेका छन्।
बुबा सिकिस्त भएको बेला २०६९ सालको सुरुमै उनले चिना हेरे। वृहस्पति दशा गएपछि र शनि सुरु भएपछि त्यो घटना भएको थियो। भन्छन्, 'गुरुले पढाउँदा भनेझैं अष्टमेशको दशा चल्दा पितृको निधन भयो। शनि सुरु भएको पाँच दिनमै बुबालाई गुमाउनु प:यो। मैले गाउँकालाई भनेकै थिएँ, यस्तो देखिएको छ भनेर।'
प्यूठानका पोखरेल यति बेला जोरपाटीमा छन्। हस्तरेखा हेर्ने ५६ वर्षीय पोखरेलले सानैमा प्यूठान, दाङ, गुल्मी, काठमाडौं हुँदै र दिल्लीमा समेत आफ्नो भविष्य देखाएका थिए। तीन महिनाअघि कान चिलायो उनको। जोरपाटीको स्तूपादेखि वीर अस्पतालसम्म पुगे। केही गरे पनि निको भएन।
आफैं चिना हेरे, 'राहुको महादशा, शनिको अन्तरदशा र योगिती दशा रहेछ। जब संकटा सकियो तब गत साता कान कोट्याउँदा जेलपेनको टुप्पोमा रहेको निप छोप्ने प्लास्टिकको टुक्रो निस्कियो।'
चिनाबाट संवयको भविष्‍य थाहा पाउन सकिने बताउँदै भोलानाथ थप्‍छन, वृहस्पतिले कस्तो रस दिन्‍छ, कुन बेला कस्तो ग्रह आएको छ र परिवारलाई कहिले के भनेर सजग गराउनजस्ता कुरा फाइदा हुन्‍छ।'
भावी जीवन पहिल्‍यै देखिने भएकाले रोग, दु:ख र सुखबारे सचेत हुन पाइने उनको भनाई छ। ज्‍योतिषीलाई हेराउनु भनेको जोगिने उपाय हो, यसबाट ग्रहरहरुको सन्तुलन गर्न सकिन्‍छ। पानी पर्दैछ भने छाता बोक्‍न पाएजस्तै हो, थाहा नहुँदा निथ्रुक्‍क भिज्‍न सकिन्‍छ।'
भर्खरै म बिरामीबाट उठेँ, एकदमै कमजोर भएको छु। मेरो चिना हेर', उनका बुवाले भेट हुनेबित्तिकै भनेका थिए। बुवा वेदान्ती भएकाले भोलानाथ खरेलले पनि प्रस्ट भनेका थिए, 'चैत महिना हो।' फेरि प्रश्न तेर्सियो, 'तैंले मेरो प्राण भेट्छस्?' उनले भनेका थिए, 'भेट्ने योग छैन।'
संखुवासभामा रहेका उनका बुवाको उमेर ८३ थियो। उनी भेट्न गएका थिए। नभन्दै उनी इटहरी आएर फर्किन भ्याएनन्। उनका बुवा फागुन ५ गते बिते। भन्छन्, 'आयु तोक्न धेरै गाह्रो हुन्छ।'
असी पुगेपछि बसी खाने उमेर भए पनि सुनसरी इटहरीका भोलानाथ खरेल ज्योतिषकर्ममा व्यस्त छन्। उनले आफ्नो बाँकी जीवनबारे पनि हेरिसकेका छन्। पत्नीलाई अघि लगाउने योग गरेको बताउने उनी भन्छन्, 'अन्तिम वर्षहरू नराम्रा छैनन्। अब धेरै वर्ष पनि छैनन्।'
चिनाबाट स्वयंको भविष्य थाहा पाउन सकिने बताउने खरेल थप्छन्, 'वृहस्पतिले कस्तो रस दिन्छ, कुन बेला कस्तो ग्रह आएको छ र परिवारलाई कहिले के भनेर सजग गराउनेजस्ता कुरा फाइदा हुन्छ।' भावी जीवन पहिल्यै देखिने भएकाले रोग, दु:ख र सुखबारे सचेत हुन पाइने उनको भनाइ छ।
'ज्योतिषीलाई हेराउनु भनेको जोगिने उपाय हो, ग्रहहरूको सन्तुलन गर्न सकिन्छ', थप्छन्, 'पानी पर्दैछ भने छाता बोक्न पाएजस्तै हो, थाहा नहुँदा निथ्रुक्क भिज्न सकिन्छ। यो आफूमा पनि लागू हुन्छ।' भविष्यवाणी गर्न यो विद्या पढेरमात्र हुँदैन। भावहरू जन्मकुण्डलीहरूमा कसरी परेका छन् सोहीअनुसार फलहरूको अपेक्षा गर्न र सुधार गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।
२०१६ सालमा पहिलोपटक नै खरेलले आफ्नो चिना हेरेका थिए। उनी भावी कहाँ बसेको छ, दशा र महादशाहरूको अवस्था के छ? उनी आफ्नाबारेमा यिनै कुरा हेर्छन्।
उनका अनुसार महादशाहरू शनि १२ वर्ष आठ महिना, राहु १२ वर्ष, वृहस्पति सूर्यको चार र चन्द्रमाको ६ वर्ष आठ महिना, मंगलको चार वर्ष आठ महिना चल्छन्। यसैगरी गोतरीलगायतका साना दशासँगको भाव मिलाएर आफ्नो र अरूको भविष्य हेर्ने उनले बताए।
भन्छन्, 'म अरूको भविष्य हेरेर रमाउने मान्छे, आफ्नोबारे कौतूहल लाग्दैन। काम परेमात्र हेर्छु।' 'म आध्यात्मिक बन्ने र नाम छोडेर जाने अर्का ज्योतिषीले भनेका छन्, मैले पनि त्यो देखेकी छु', काठमाडौं काँडाघारी बस्दै आएकी झापा दमककी राधा बाँस्कोटा आफ्नो भविष्य यसरी बताउँछिन्।
एक छोरी र एक छोरा कक्षा १२ मा विज्ञान विषय पढिरहेका छन् उनका। उनीहरूले चाहे भने बिदेसिने योग छ दुवैको। भन्छिन्, 'उनीहरूको चिना हेर्दा गरी खाने देखिएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन।' आफूले चिना नहेर्दै छोरी रिसाएपछि राधा ज्योतिषीकहाँ पुगिन्।
ज्योतिषीले काल सर्प योग छ, औंठी बनाएर ल्याउनू, म दोष हटाइदिन्छु भने। उनले पनि त्यसै गरिन्। 'पछि आफैंले चिना हेर्दा त्यो केही रहेनछ', उनी भन्छिन्, 'काल सर्प योग हुन उल्टो घुम्ने राहु र केतुका बीचमा बाँकी सबै ग्रह हुनुपर्छ। एउटा ग्रह पनि बाहिर छ भने आंशिक काल सर्प योग हुन्छ। मेरो आंशिक छ।'
'आफ्नो भविष्य आफैं हेर्दा पूर्वाग्रहीपन आउँछ' भन्ने उनको नौमध्ये तीनवटा ग्रह बलवान् भए भने मानिसको जीवन सुखमय हुने बुझाइ छ। खासमा जन्मँदाको समयको ग्रहदशाले मरणसम्मलाई भविष्यवाणी गर्न सकिने उनी बताउँछिन्।
ज्योतिष विद्या पढेपछि राधालाई थाहा भयो, 'खराब ग्रहहरू छन् भन्‍ने पूर्वसूचना भयो भने तिनलाई शान्त गर्न सकिन्छ। त्यसपछि ती ग्रह छोएरमात्र जान्छन्, गाडिएर बस्दैनन्।' कतिपय कुरा सही भए पनि सोझै भन्दा त्यसले उल्टै ठूलो हानि हुने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार विवाह र व्रतबन्ध गर्दा अनि विदेश जाँदा ज्योतिषी हेराउनु उत्तम हुन्छ।'
उनलाई ज्योतिषीले भनेका थिए, '१५ वर्षको उमेरदेखि उल्काले घेरेको हुनाले घर छोडाउने योग छ भनेका थिए, मेरो १६ वर्षमै विवाह भयो।' ३२ वर्षीया उनलाई सामाजिक संस्थामा काम गरिरहेका बेला २०६१ माघ २७ गते तत्कालीन माओवादीले अपहरण गरे।
४८ घन्टापछि मुक्त भएकी उनले भनिन्, 'त्यो समयमा मलाई ज्योतिषशास्त्रमा पटक्कै विश्वास लाग्दैनथ्यो, नत्र पूर्वसचेत हुन्थेँ होला। हुने कुरा भएरै छोड्छ भन्ने लाग्थ्यो।'
राधाको वृहस्पति लग्नमा छ। यस्तो अवस्थामा एक लाख दोष नाश गर्ने उनको बुझाइ छ। यति हुँदाहुँदै पनि उनले आफ्नो भविष्य हेर्दा थुप्रै उतारचढाव देखेकी छन्। यसले उनलाई सतर्क गराएको छ। भन्छिन्, 'तीन वर्षअघि दुर्घटनामा परेँ। पछि हेर्दा अझै चोटपटक लाग्ने देखिएकाले जोगिनुपर्छ।
आफ्नो नामबाट सवारीसाधन खरिद गर्न हुन्न मैले।' दुई वर्षअघि पहिलोपटक चिना हेर्दा आफू किन नडराउने, नलजाउने र हठी स्वभावकी छु भनेर हेरिन् उनले। सिंह लग्नबाट सुरु भएका कारण मानिस निडर प्रकृतिको हुने र भगवान्को गुरु वृहस्पति लग्नमा बस्दा एक लाख दोष नाश हुने भएको थाहा पाएको उनको भनाइ छ।
कुनै काम गर्नुअघि चिना हेर्ने सन्दर्भमा धादिङका माधवराज पाण्डे भन्छन्, 'ज्योतिषी भए पनि म भाग्यवादीमात्र होइन, कर्मवादी मानिस पनि हुँ। यसलाई सहायक तत्त्वका रूपमा मात्र लिन्छु पूर्ण भन्‍ने लाग्दैन।' तर, उनलाई ज्योतिषीले भविष्यवाणी गरेका प्राय: सबै कुरा पुगेका छन्।
आफ्नै हजुरबुवा ज्योतिषी भएकाले यस क्षेत्रमा तानिएको बताउने उनलाई हजुरबुवाले दुईवटा कुरा भनेका रहेछन्, 'विवाह गर्दैनस्, गर्दा पनि कि ढिलो कि निकै अप्ठ्यारो पर्छ। दोस्रो, जागिर खान खोज्छस् तर हुँदैन। भए पनि टिक्दैन।' नभन्दै त्यस्तै भएको छ उनको जीवनमा।
४० वर्षको उमेरमा विवाह गरेका उनले लोकसेवा आयोगमा नाम निकाल्न सकेनन्। जागिरको सट्टा उनी यति बेला राजनीतिमा छन्। अंग्रेजी पढ्ने इच्छा भएका उनी यति बेला ज्योतिषी पेसामा रमाएका छन्।
पाण्डेले पछि आफ्नो चिना आफैं हेरे, देखे, 'सुख स्थानमा सूर्य निचो र राहु पनि बसेको छ साथमा।' उनले काठमाडौंमा घर बनाउन खोजेको केही समय भयो तर सम्भव भइरहेको छैन। थप्छन्, 'मसँग सम्पत्ति नभएको पनि होइन तर ग्रहदशाका कारण कहिलेकाहीँ सोचेको र गर्न खोजेको काम पनि नहुँदो रहेछ।'
ज्योतिषी लोकराज पौडेललाई देखाउँदा उनले राजनीतिमा व्यवधान हुने बताएका रहेछन्। नभन्दै नेपाली कांग्रेसबाट गत निर्वाचनमा टिकट पाउने उनले पाएनछन्। तर पनि फलिफाप हुने संकेत पाएपछि आफैं चिना हेर्दा धनु राशिका उनले शनि उच्च भएको पनि बुझेका थिए।
भन्छन्, 'सायद त्यही भएर होला, टिकट नपाए पनि नेपाल ज्योतिष परिषद्को महाधिवेशनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएको छु। अब अपूरा काम पूरा र केही नयाँ काम गर्नेछु।' ज्योतिषीले उनको कान्छो छोरोबारे देखाउँदा राजयोग रहेको बताउँछन्।
तर, निमोनिया बिग्रिएको १२ वर्षीय उनको छोरो सुस्त नस्थितिको छ। थप्छन्, 'ज्योतिषीले सबै मिलाउँछन् वा मिलाउँछौं भन्‍ने हुँदैन। अब भाग्य, असावधानी वा ज्योतिष विद्या खै कसलाई दोष दिने?'
'सानामा ज्योतिषी हेराइनँ, आमाले पनि देखाउनुभएको थाहा छैन। क्याम्पस पढ्ने भएपछि हेराएँ, त्यति बेलै शिक्षा क्षेत्रमा भविष्य छ भनेका थिए', प्राध्यापन पेसामा रहेका बागबजारनिवासी प्रेमराज घिमिरे भन्छन्, 'अहिले बागबजारमै स्कुल खोलेको छु। मलाई अहिले अर्को क्षेत्रमा जान मन लाग्दैन।
मैले पनि भविष्य शिक्षा क्षेत्रमै देखेँ।' सूर्य पाप ग्रह हो। बुध अर्धपाप र अर्धपुण्य ग्रह हो। उनी अरूलाई छिट्टै विश्वास गर्छन् र अरूले त्यसलाई स्वार्थसँग जोड्छन्।
तर, अन्त्यमा प्रेमको वास्तविकता बुझेपछि आफूअनुकूल हुने बताउने उनी भन्छन्, 'सूर्य बुधको छेउमा बसेकाले यस्तो भएको रहेछ।' एउटी छोरीका बाबु उनले अर्को सन्तानका रूपमा छोरो हुने देखेका छन्।
युवामा घिमिरे ज्योतिष कामलाई धार्मिक दृष्टिले हेर्ने र ठगी खाने भाँडो हो भनी बुझ्दथे। तर, यो विज्ञान पनि रहेछ र साँच्चै जीवनसँग जोडिएको र पूर्वसचेत हुने अवसर पनि भएको ४० वर्षीय उनको बुझाइ छ।
भन्छन्, 'सामूहिक व्यापार वा कुनै काम गर्नु परे म तिनको नाम, राशि र नक्षत्र हेर्छु, चल्तीको नामबाट उनीहरूले थाहै नपाई पछिसम्मको सम्बन्ध र फलिफाप हुने हेर्छु, अनिमात्र हात हाल्छु वा यस्तै सल्लाह अरूलाई दिन्छु।' केही ज्योतिषीले चिना हेरेर विदेशको योग छ भने पनि आफूलाई विदेशम मन नलाग्ने उनी बताउँछन्।
ज्योतिषी बनेपछि उनले आफ्नो चिना नै गल्ती बनाइएको पुष्टि गरे। थप्छन्, 'कतिपयको भविष्य जुन ज्योतिषीले हेरे पनि सही देखिन्नँ किनकि उसको चिना बनाउँदा वा जन्ममिति टिपाउँदा नै गलत टिपाइएको हुन्छ।'
सहायक पेसाका रूपमा ज्योतिषी पेसा अँगालेका उनी अरूको भविष्य हेर्नेभन्दा बढी यस क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न चाहन्छन्। 'विद्यालयमा फरक खालका विद्यार्थीमाथि ज्योतिष विद्याले काम गरिरहेछ।
कुनै विद्यार्थी किन फरक छ, किन पढ्दैन, किन रिसाउँछ वा कसैलाई पिट्छ आदिमा अध्ययन गरिरहेकै हुन्छु', भन्छन्, 'मनोविज्ञान नबुझी जबर्जस्ती पढाउने वा ठीक पार्छु भन्‍ने निर्णयले दुर्घटना भएका छन्। भ्रामरीको समयले राहुकेतुले बास गरेको छ छैन बुझेर काम गर्नुपर्छ। मेरो पनि साढे साती सकिएको छ, अब राम्रो हुन्छ।'
टेकराज शास्त्री, सिद्धान्त ज्योतिषशास्त्री
वेदको मुख व्याकरण हो भने आँखा ज्योतिष। यसले देख्ने वा देखाउने काम गर्छ। गणितको माध्यमद्वारा गणना गरेर अरूलाई बाटो देखाउने व्यक्ति ज्योतिषी हो।
आफ्नो भविष्यका लागि पनि उसले चिना, हात आदि हेर्न सक्छ। तर कतिपय कुरा नमिल्नसक्ने भएकाले आफ्ना हकमा भने अरू ज्योतिषीको परामर्श लिनुपर्छ। सम्पूर्ण आचार्यहरूका पुस्तक पढेर निचोड निकाल्नुपर्ने भएकाले पनि अरूसँग सल्लाह लिने प्रचलन छ।
ज्योतिष भनेको विज्ञान हो। ज्योतिषीहरूले चन्द्र, सूर्य, सात बार, नौ ग्रह, १२ राशि र २७ नक्षत्रका साथै खगोलीय आधारबाट मानिसको भविष्य हेर्ने भएकाले यसलाई विज्ञान मान्न सकिन्छ। त्यसैले विज्ञानसँग हुबहु मिलेको हुन्छ।
विज्ञान आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निकै अघि बढ्यो तर हामी पुराना पुस्तकहरूका आधारमा अल्झिएकाले पछि परेका हौं। ज्योतिषी गणितीय आधारमा छ भने फेल हुन्न। तर, उसले पढेरमात्र हुन्न, निरन्तर साधनाका साथमा आत्मबुद्धि र आत्मनिर्णय पनि चाहिन्छ।
मिति : २०७१ भदौ, २८ शनिबार
- See more at: http://annapurnapost.com/en/news/specialpage/13651/%E0%A4%AD%E0%A4%BE%E0%A4%97%E0%A5%8D%E0%A4%AF-%E0%A4%B9%E0%A5%87%E0%A4%B0%E0%A5%8D%E0%A4%A8%E0%A5%87%E0%A4%95%E0%A5%8B-'%E0%A4%AD%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E2%80%8D%E0%A4%AF'.htm#sthash.pjReZiiD.dpuf
Dashain Ticket 71
मनाइयो इन्द्रजात्रा : कुमारीको रक्षा गर्ने सिंह नै असुरक्षित
रथले धक्‍का दिएपछि भुइँमा खसेको कुमारीको रक्षक मानिले सिंहको आकृति। तस्बिर: अन्‍नपूर्ण
काठमाडौं : पूजाका लागि आमालाई मनपर्ने पारिजातको फूल चोरी गरेपछि भगवान् इन्द्रलाई समातेर डोरीले बाँधी सजाय दिइएको सन्दर्भ स्मरण गर्दै सोमबार राजधानीमा इन्द्रजात्रा मनाइएको छ। भाद्र कृष्ण चतुर्दशीदेखि सुरु हुने आठदिने जात्राको मुख्य दिन सोमबार कुमारी, गणेश र भैरवको रथ तानियो।
इन्द्रजात्रा हेर्न अपराह्न ४ बजेर ३१ मिनेट जाँदा हनुमानढोका दरबार क्षेत्र पुगेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले स्वीकृति दिएपछि कुमारीको रथ तानिएको थियो। करिब आधा घन्टा कुमारी शक्ति जागृत गर्न गरिने पूजा सकिएपछि चार बजेर ४५ मिनेटमा कुमारीलाई रथमा पुर्‍याइएको थियो।
रथ तान्दा असन्तुलित बन्न गई त्यसले कुमारी घर प्रवेश गर्ने मूलढोकाअगाडि दुईतिर राखिएका कुमारीका रक्षक मानिने सिंहका आकृतिमा धक्का दिएको थियो। रथले लागेर प्रवेशद्वारको देब्रेतर्फको रहेको सिंहको आकृति दुई टुक्रा भए पनि भुइँमा झरेन तर दाहिनेपट्टिको सिंहको आकृति टुक्राटुक्रा भएर भुइँमा खसेका थिए।
जात्रामा सहभागी एक वृद्धले भने, 'कुमारीको रक्षा गर्ने सिंह नै असुरक्षित भए।' संस्कृतिविद् ओम धौभडेलले यस्तो घटना पहिलोपटक भएको हुन सक्ने बताउँदै भने, 'गुठीका मानिसले संयमित भएर रथ तान्नुपर्ने थियो।
राणाकालदेखि नै राज्यले मान्दै आएको कुमारीको रक्षक सिंहको आकृति ढल्नुलाई शुभसंकेत मानिन्‍न।' गणेशको रथलाई बाटो दिन प्रवेशद्वारको केही अघि पु:याइएको कुमारीको रथ पछि सार्न पाँचपटकसम्म प्रयास गर्नुपरेको थियो।
इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न राष्ट्रपतिसँगै उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, सभामुख सुवास नेम्बाङ, मन्त्री, विभिन्न देशका राजदूत, सेना र प्रहरीका प्रमुख तथा सरकारी उच्च अधिकारी पनि पुगेका थिए। उनीहरूले ५ बजेर ११ मिनेटसम्म जात्रा अवलोकन गरेका थिए। सर्वसाधारणको उपस्थिति पनि बाक्लो थियो।
कुमारी क्लबका अध्यक्ष राजक ल्याण ताम्राकारका अनुसार तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्रीहरूले बेलायतीहरूलाई नेपालको पृथक संस्कृति देखाउन इन्द्रजात्रा देखाउने गर्थे। उनले भने, 'वीरशमशेरको पालादेखि नेपालमा राजदूत भएर आउनेलाई देखाउन थालिएको थियो।' इन्द्रजात्रा कान्तिपुरका अन्तिम मल्ल राजा जयप्रकाशको पालादेखि सुरु भएको हो।
जात्राको पहिलो दिन वसन्तपुरको काल भैरवअगाडि लिंगो ठड्याइन्छ भने आठौं दिन ढालेर सेलाइन्छ। ताम्राकारले भने, 'पञ्चांग निर्णायक समितिले १५ दिनअघि लिंगो गाड्ने र ढाल्ने साइत जुराएर पठाउँछ, तिथिका आधारमा तय गरिने यो जात्रा सामान्यतया आठदिने भए पनि यसपटक सात दिनमा सकिँदैछ।' उनका अनुसार जात्राको अन्तिम दिन भदौ २७ गते राति २ बजेर ३ मिनेटमा लिंगो ढालिनेछ।
कुमारी, गणेश र भैरवको रथ सुरु हुनुअघि इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्ती अर्थात् पुलुकिसी प्रदर्शन गरिएको थियो। जात्रा हेर्न पुगेका हजारौं भक्तजनले पुलुकिसी र रथयात्राको तालीले स्वागत गरेका थिए। तीनवटै रथको प्रदर्शनपछि तिनलाई रथसँग सम्बन्धित स्थानीय युवाले लगन, इन्द्रचोक, बांगेमुडा, भीमसेनस्थानमा पु:याई नगर परिक्रमा गराएका थिए।
सो क्रममा वर्षभरि दिवंगत भएका नेवार समुदायका आफन्त रथको पछि लाग्ने चलन छ। वर्षा र सहकालका देवताको प्रतीकका रूपमा रहेका इन्द्रको पूजाआराधना गरी सोमबार काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे र दोलखाका नेवार समुदायले यो जात्रा मनाएका छन्।
जात्राका क्रममा हनुमानढोका र आसपासका क्षेत्रमा इन्द्रध्वजा फहराइएको छ। किंवदन्तीअनुसार प्राचीन काष्ठमण्डप (काठमाडौं) अर्थात् नेपाल मण्डलमा एक दिन देवताका पनि राजा इन्द्रले पूजाका लागि आमालाई मन पर्ने फूल पारिजात टिपेका थिए।
फूल चोरीको आरोपमा त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाले उनलाई समातेर डोरीले बाँधी सजाय दिएका थिए। पछि परिचय खुलेपछि उनकी आमालाई बोलाइयो। 'अनर्थ भयो' भन्दै प्रत्येक वर्ष सोही दिन इन्द्रको नाममा जात्रा मनाउने सहमति भएको थियो। सरकारले पनि इन्द्रजात्राका दिन काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ।
मिति : २०७१ भदौ, २४ मंगलबार
- See more at: http://annapurnapost.com/en/news/social/13457
Labels: इन्द्रजात्रा, कुमारी, रामवरण यादव, हनुमानढोका
दसैंका यात्रु : बुकिङ नखुल्दै सकियो टिकट !
काठमाडौं : सरकारले दसैं, तिहार र छठ पर्वका लागि आगामी बुधबारदेखि लामो रुटका बसको टिकट बुकिङ खुला गर्ने निर्णय गरे पनि अहिले काउन्टर पुग्ने यात्रुले टिकट सकिएको जबाफ पाउन थालेका छन्। यात्रुको सुविधालाई ध्यान दिएर सरकारले सबै बसको टिकट बुकिङ एकैपटक २५ गते बिहान सात बजेबाट खुला गर्ने निर्णय भदौ ५ गते गरेको थियो।
घट्टेकुलो बस्दै आएकी बबिता अधिकारीले असोज १२ गतेका लागि झापा जान टिकट काटिसकिन्। उनले गौशालास्थित एक होटेलमार्फत नमस्ते डिलक्सका तीनवटा टिकट लिएकी हुन्। उनका आफन्त सन्तोष पौडेलले झापाकै दमकका लागि टिकट लिन विभिन्‍न बसका काउन्टर पुगे तर पाएनन्।
त्यसपछि उनले पनि सोही होटेलमार्फत शुक्रबार दुईवटा टिकट लिए। 'दिदीहरू पनि घर जाने भएपछि हामीलाई थप दुईवटा टिकट चाहिएको थियो तर सिट छैन भन्दै कुनै काउन्टरले दिएनन्', उनले भने।
भक्तपुर बस्दै आएकी इटहरी सुनसरीकी निरू दाहालले फूलपातीका दिनको टिकट बुकिङ गरिसकिन्। नोबल एकेडेमीमा कक्षा ११ मा अध्ययनरत उनले भनिन्, 'कोटेश्वरबाट मेट्रो डिलक्समा टिकट पाएँ, केही दिनअघि बुकिङ गरें, अहिले त पाइँदैन रे।'
रकारले सबै बसको टिकट बुकिङ एकैपटक २५ गते बिहान सात बजेबाट खुला गर्ने निर्णय भदौ ५ गते गरेको थियो।
कोटेश्‍वरमा काउन्टर रहेको महालक्ष्मी डिलक्समा घटस्थापनादेखि नवमीसम्मका लागि टिकट छैन। काउन्टरका एक कर्मचारीले भने, 'तपाईंलाई चाहिएको भए अर्को गाडी थपिएपछिमात्र पाउनुहुन्छ, पछि आउनोस्।'
घटस्थापनाको पर्सिपल्ट घर जान टिकट खोज्दै कोटेश्वरस्थित साकिरा यातायातको कार्यालय पुगेका धर्मराज कार्कीले भने, 'साकिराका पूर्वाञ्चलका लागि झन्डै डेढ दर्जन बस छन्। तर मैले कुनै पनि गाडीको टिकट पाइनँ।'
सुन्धारास्थित प्रिन्स डिलक्सका कर्मचारीले सुन्धारा काउन्टरबाट पूर्वका लागि सबै टिकट बिक्री भइसकेको बताउँदै अन्य काउन्टरमा गएर टिकट खोज्न सल्लाह दिए। अग्नि र मकालु यातायातले भने २५ गतेअघि टिकट बिक्री नगर्ने जानकारी दिए।
कोटेश्वरस्थित काउन्टरका एक कर्मचारीले भने, '२५ गतेदेखि टिकट बिक्री गर्ने भने पनि यात्रु आएपछि टिकट दिएका हौं। यात्रुको चाप अधिक भएकाले थेग्न कठिन भयो।'
मध्यपश्‍चिम र सुदूरपश्‍चिममतिर जाने बसले भने टिकट बिक्री गरेका छैनन्। डोटी सिलगढीका लागि टिकट खोज्न सुन्धारा पुगेका कालोपुल बस्ने राजीव बोगटीले भने, 'अघिल्ला दुई वर्ष मुढा र एक वर्ष बुनोटमा बसेर अत्यन्तै दु:खले घर पुगें। त्यसैले यसपालि चाँडै टिकट खोज्न आएको हुँ।'
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव शरद सिटौलाले बुकिङ खुला हुनुअघि टिकट बेच्नु सम्बन्धित यातायात व्यवसायीको कुरो भएको बताए। उनले भने, 'एउटा आधार खडा गरिएको हो, सबैले मानिदिए राम्रो।'
उनका अनुसार दसैंको मुखमा थानकोट, कोटेश्वर, बालाजु र बल्खु गरी चार नाकाबाट बाहिरिनेको यात्रुको संख्या यसपटक ३५ लाखभन्दा बढी हुन्छ। उनले भने, 'त्यसको सहज व्यवस्थापनका लागि महासंघले मात्रै सक्दैन।' सिटौलाले फूलपातीदेखि तीन दिन दैनिक तीन हजार पाँच सय बस उपत्यकाबाट बाहिरिने बताए।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले भने, '२५ गतेअगाडि नै टिकट बिक्री भएको जानकारी आएको छ। यसबारे महासंघ र प्रहरीसँग समन्वय गरेर यथार्थ बुझी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।'
मिति : २०७१ भदौ, २३ सोमबार
मनाइयो इन्द्रजात्रा : कुमारीको रक्षा गर्ने सिंह नै...